China puppy pads fanamboarana sy orinasa | Bondhot
Pads tonga lafatra ho an'ny Potty Training
Omeo ny zanak'alikao ny fotoana mety indrindra hahitana fahombiazana raha ny momba ny fiofanana vilany. Ny paompy fiofanana momba ny biby dia manome fahombiazana ambony noho izay azo antoka ary alika kely mahafatifaty dia mianatra haingana.
Ankoatry ny fanofanana zazakely dia miasa tsara ihany koa ireo pads amin'ny fanampiana ireo alika marary na antitra, manao izay ahitan'ny alika alalana kokoa mandritra ny fitaterana, na manolotra safidy hafa ho an'ny alika tsy misy fidirana ivelany eny ivelany.
Habeny maro no azo zahana: ny habe malaza indrindra dia 22x22inches, 22x23inchs
Afaka manao habe maro isika araka ny takian'ny mpanjifa.
Famolavolana famoahana 5Layer
Ny pad tsirairay dia misy sosona dimy mba hiantohana ny fahombiazan'ny porofo. Ny sosona ambony miady amin'ny bakteria dia manome tampon-kazo fanamainana haingana izay mihidy amin'ny hamandoana, mifehy fofona ary misoroka ny fanarahana. Ny sosona mihombo dia mitazona ranon-javatra mankany amin'ny làlana tsara, raha toa kosa ny fotony toy ny spaonjy dia mandray fatra ambony indrindra ary mamadika ny rano ho lasa gel rehefa mifandray. Ny sosona roa farany amin'ny fiofanana momba ny biby an-tsokosoko dia manadio ny sosona fanidiana sy ny lining plastika miaro –ary miaro ny gorodona tsy ho simba.
Manintona voaorina amin'ny vokatra haingana
Namboarina manokana miaraka amina mpiorina mahaliana, ny alika dia voasarika mankany amin'ny pad rehefa miantso ny natiora, izay midika hoe fampiofanana potizy haingana kokoa sy mahomby kokoa ho an'ny alikanao. Misafidiana fotsiny hoe aiza no tianao alehan'ny alikao, sokafy ny pad, ary apetraho amin'ny gorodona miaraka amin'ny ilany plastika.
Ny pad fampiofanana momba ny biby dia manome fanamaivanana mety ho an'ny alikao sy fiadanan-tsaina ho anao. Raha vantany vao ampiasaina, ny volavolan-tsolika mitaingina sy ny liner-proof-pad dia manadio haingana. Atsipazo fotsiny ilay pad, ary apetraho ilay iray vaovao.
Torohevitra momba ny fiofanana
Ampio fantaro amin'ny alàlan'ny pad ny alokao amin'ny alàlan'ny fametrahana azy eo ambonin'ilay pad imbetsaka mandritra ny andro. Rehefa mandeha tsara ny vilany eo amin'ny pad, dia manome valisoa avy hatrany amin'ny fiderana am-bava sy fitsaboana manokana, avy eo soloina vaovao ilay pad. Raha manary any amin'ny toeran-kafa ny alikanao dia apetraho moramora eo amin'ny pad hatrany izy ho fampaherezana, ary ampiasao hatrany ny fanamafisana tsara (tsy miiba mihitsy). Mba hahitana vokatra tsara indrindra, dia afatory amin'ny toerana kely kokoa ny alikanao toy ny lakozia na fandroana.
Teo aloha: Fitaovana fandehanana alika alika kely
Manaraka: Fambolena saka fako